द्रौपदीले पाँच पाण्डवसँग कसरी मनाएकी थिइन् सुहाग*रात ? यतो छ नालीबेली हेर्नुहोस ! – Pradesh Online Khabar
द्रौपदीले पाँच पाण्डवसँग कसरी मनाएकी थिइन् सुहाग*रात ? यतो छ नालीबेली हेर्नुहोस !
रोचकNo Comment on द्रौपदीले पाँच पाण्डवसँग कसरी मनाएकी थिइन् सुहाग*रात ? यतो छ नालीबेली हेर्नुहोस !
एजेन्सी। द्रौपदीले पाँच पाण्डवसँग कसरी मनाएकी थिइन् सुहाग*रात ? यतो छ नालीबेली हेर्नुहोस ! महाभारत को कथाको बारेमा सबैलाई अलि अलि थाहा भएको बिषय हो ! महाभारत थाहा भएको लाइ पाच पाण्डब र सय कौरवबीचको युद्द को बिषय को बारेमा पनि थाहा हुन सक्छ ! महाभारतकै पञ्च पाण्डवसँग पात्र द्रौपदीले विवाह गरेको प्रसंग पनि थाहा छ ।द्रौपदीले पाँचवटा श्रीमानसँग विवाह गरेको कुरा त तपाईले महाभारतमा पढ्नु नै भएको होला । तर पाँच श्रीमान भएकी उनले कसरी सुहागरात मनाईन् भन्ने कुरा अझ रोचक रहेको छ । दुर्योधनले पाँचै भाइ पाण्डबहरुलाई मार्ने खवर फैलिएपछि, डराएका पाण्डबहरु आमा कुन्ति सहित ब्राम्हण जीवन ब्यतित गर्न थालेका थिए । यसरी पाण्डवहरु हरेक दिन भिक्षामा आएको सामा आमालाई सुम्पिएर मात्रै उपभोग गर्ने गर्दथे।
राजा द्रुपदको दरबारमा त्यसबेला द्रौपदीको स्वयम्बरको समय चलिरहेको थियो जहाँ बिभिन्न देशका राजकुमारहरु उपस्थित थिए । राजाले स्वयंवरमा एउटा सर्त राखेका थिए । जसले तलाउमा हेरेर रुखमाथी झुण्ड्याईको माछाको आँखाको नानीमा तीरले साँध्न सक्छ, उसैसित द्रोपदीको बिवाह हुने तय थियो।अर्जुनले भगवान श्रीकृष्णसंग आज्ञा लिएर धनुषमा बाण चढाए र तलाउतर्फ निहुरिएर चलाएको तीर माछाको आँखा बिचबाटै बाहिरियो। राजाको पूर्व सर्त अनुसार द्रौपदीले अर्जुनलाई स्वयंवर गरेकी थिइन्। द्रौपदीलाई लिएर खुशीले गदगद हुंदै माता कुन्तीको चरणमा सुम्पिन हतारिएर आईपुगेका पाण्डवहरु तर्फ हेर्दै नहेरी कुन्तीले सबै भाइले बाँडेर राख्नु भनेकी थिइन्।
आमाको बचनलाई आदेश मान्ने पाण्डबहरुले बिरोध जनाएनन्। यस कुराबाट आहत बनेका राजा द्रुपदले व्यास ऋषीसंग सल्लाह लिए । पुर्वजन्ममै देवादी देव महादेवले द्रौपदीको तपस्याबाट प्रसन्न भएर बरदान दिएका थिए। द्रौपदीले आफूलाई संसारकै सर्बज्ञानी पुरुष पति बनाउन पाउं भनेर पाँच पटकसम्म भनेकी थिइन् । पाचैँ पटकसम्म नै महादेवले तथास्तु भनेका थिए।यसप्रकार द्रौपदीका पाँच जना पति भएका हुन् । तर हिन्दु धर्ममा एक स्त्रीले एक जना पुरषसंग मात्र बिवाह वा सहबास गर्नुपर्ने नियम भएका कारण महादेबले द्रोपदीलाई बरदान दिंदा नै उनले हरेक पटक स्नान गरेपछि कुमारी नै अवस्थामा फर्किने बरदान पनि दिएका थिए। सवैभन्दा पहिले जेठा दाजू युधिष्ठिरले सुहागरात मनाए त्यसपछि भिमले त्यसैगरी प्रत्येक पाण्डवले कुमारी द्रौपदीसंग सहबास गर्न पाए। यी कुराहरु धार्मिक ग्रन्थहरुमा उल्लेख गरिएका छन्। महादेवकै बर पाएका कारण दौपदी पञ्च कन्या मध्येकी एक हुन् । पाँचवटा पति भए पनि उनी कन्याका रुपमा कहलिन्छिन् । शास्त्रमा पञ्चकन्याका रुपमा अहिल्या द्रौपदी, कुन्ती, तारा र मन्दोदरी उल्लेख गरिएको पाइन्छ ।
यो पनि पढ्नुहोस ! यी बलिउड अभिनेत्री पतिसँगको सम्ब*न्धबाट नभई बोइफ्रेन्डसँगको सम्ब*न्धबाट ग*र्भवती भएका थिए हेर्नुहोस् ! एजेन्सी : यी बलिउड अभिनेत्री पतिसँगको सम्ब*न्धबाट नभई बोइफ्रेन्डसँगको सम्ब*न्धबाट ग*र्भवती भएका थिए हेर्नुहोस् ! ! बलियुड का चर्चित कलाकार सेलिब्रेटी हरु दुनियामै चर्चा मा रहेपनि उनीहरुको आखा भनेको सच्चा प्रेम मै रहने गरेको हुन्छ ! त्यस्ता केहि बलियुड सेलिब्रेटी हरुले सच्चा प्रेम बलियुड भित्रै बाट पाएका छन् भने कोहिले बलियुड भन्दा बहिरबाट पाएका छन् ! यस्तै बलिउड नायिकाहरुको अफेयर बारे धेरैनै चर्चा हुने गरेको छ। प्राय नायिकाहरुको प्रेम सम्बन्ध भनौ अथवा विवाह बलिउड भित्रकै कलाकार, निर्माता, निर्देशकहरुसँग हुने गरेको छ।प्रेम सम्बन्धकै क्रममा केहि नायिकाहरु गर्भवती भएको समेत घटनाहरु सार्वजनिक हुने गरेका छन्। विवाहनै नगरी बोइफ्रेन्डसँगको सम्बन्धबाट गर्भवती भएका नायिकाहरु निम्न उल्लेखि छन्।
सेलिना जेटली : बलिउड अभिनेत्री विवाह अगाडीनै गर्भवती भएकी थिइन्। उनी बोइफ्रेन्ड पिटर हगसँगको सम्बन्धबाट गर्भवती भएको बताउने गरिन्छ। गर्भवती भएपछि मात्रै जेटलीले विवाह गरेकी थिइन्। विवाह गरेको केहि महिना नबित्दै जेटलीले जुम्ल्याहा सन्तानलाई जन्म दिएकी थिइन्। कोन्कणा सेन शर्मा : कोन्कणा दक्षिण भारतीय चलचित्र क्षेत्र साथै बलिउडकी चर्चित अभिनेत्री रहेकी छन्। रणवीर शोरीसँग विवाह गर्नुअगाडी कोन्कणाको अर्कै प्रेमी रहेको बताउने गरिन्छ। सोहि सम्बन्धको क्रममा कोन्कणा गर्भवती भएको र गर्भपतन गराएको भारतीय मिडियाहरु बताउँछन्। त्यसपछि मात्रै उनले रणवीरलाई डेट गर्न शुरु गरेकी थिइन्। जुन सम्बन्ध विवाहमा परिणत भएको थियो।
सारिका ठाकुर : अभिनेत्री सारिकाको दक्षिण भारतीय चलचित्र क्षेत्रका चर्चित नायक कमल हसनसँग अफेयर रहेको थियो। गुपचुप प्रेम सम्बन्धकै क्रममा सारिका गर्भवती भएकी थिइन्। सारिका त्यसबखत बोइफ्रेन्डको रुपमा रहेला कमल हसनसँगको सम्बन्धको कारण गर्भवती भएकी थिइन्। त्यसलगत्तै उनीहरूले सम्बन्धलाई बिहेमा बदलेका थिए। अमृता अरोरा : मलाइका अरोराकी बहिनी हुन् अमृता । उनको व्यापारी सकिल लदकसँग अफेयर रहेको थियो। बोइफ्रेन्ड सकिलसँगको प्रेम सम्बन्धको क्रममा अमृता गर्भवती भएकी थिइन्। यो थाहा पाउने बितिकै अमृताले हतारमा बिहे गरिन्। बिहेको केही दिनमै उनले प्रेम सम्बन्धकै क्रममा गर्भवती भएको पुष्टि हुने अभिव्यक्ति दिइन्, ‘म आमा बन्दै छु।’